တနသႅာရီဒေသအတွင်းမှ လူထုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု | Local Resources Centre
Khaing Pwint Aung Monday, September 23rd, 2019
တနသႅာရီဒေသအတွင်း ရပ်ကျေးသစ်တောထိန်းသိမ်းမှု၊ ဝေးလန်သောဒေသများမှ ဒီမိုကရေစီသင်တန်းများ၊ အခြေခံပညာရေးစာသင်ကျောင်းမှ မတူကွဲပြားခြားနားမှုနှင့် စည်းလုံးညီညွှတ်မှုဆိုင်ရာ အသိပညာသင်ကြားမှု၊ ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများအပေါ် ပြည်သူများ၏ အမြင်မှတ်တမ်းများ၊ ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းခံရသည့် HIV ရောဂါရှိသူများနှင့် မူးယစ်ဆေးဝါးသားကောင်ဖြစ်နေသူများ၏ အခွင့်အရေးကို ကာကွယ်ခြင်းစသည့် အရာများကို လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် အဘယ်နည်း။
တူညီသောဘုံပိုင်းခြေသဘောတရား သို့မဟုတ် အဖြေမှာ လူထုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပင်ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံရှိ သာတူညီမျှမှုရှိသော လူထုဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းမြှင့်တင်ခြင်းစီမံကိန်း (PEACE) ကို ဉရောပသမ္မဂမှ ပူးတွဲထောက်ပံ့ထားခြင်းဖြစ်ပြီး ဖွံ့ဖြိုးရေးမဏ္ဍိုင်အဖွဲ့ (Local Resource Centre – LRC) မှ အကောင်အထည်ဖော်ပြီး HELVETAS Myanmar နှင့် Partnership for Transparency Fund မှ ပူးပေါင်းကူညီသည်။ LRC သည် တနသႅာရီဒေသတွင်းမှ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်း (၈) ဖွဲ့ဖြင့် လက်တွဲဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသည်။ LRC မှ အစီအစဉ် ညှိုနှိုင်းရေးမှူး ဒေါ်ဖြူစင်မှ စီမံကိန်းအား အောက်ပါအတိုင်း သူမ၏ အမြင်ကို ပြောကြားခဲ့သည်။
“ဒီစီမံကိန်းကို အကောင်အထည်ဖော်ရင်းနဲ့ ကျွန်မသိလာတာကတော့ ကျွန်မဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် အသုံးဝင်တဲ့အရာတခုခုကိုတော့လုပ်နေပြီဆိုတာပါပဲ”
Civic Engagement in Tanintharyi Region
Tanintharyi Region What is the common denominator of community forestry, training about democracy in remote villages, awareness creation about diversity and unity in primary schools, documenting people’s views on the functioning of public services, defending the rights of discriminated people such as drug edicts and HIV infected people?
The common denominator is civic engagement! In the frame of the EU co-funded Promoting Equitable and Accountable Civic Engagement implemented by the Local Resource Centre (LRC) with the support of Helvetas Myanmar and the Partnership for Transparency Fund, LRC currently collaborates with eight civil society organizations in Tanintharyi Region. The LRC Coordinator in Dawei, the Region’s capital, Phyu Sin says: “With this project I have the feeling I’m doing something useful for the development of Myanmar.”